Mikatsaka fomba tsara kokoa
"Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra; ary, indro, izay làlana tsara indrindra no atoroko anareo." - 1 Kôr. 12:31.
Tandindomin-doza ny olona sasany, satria namela ny fialonana hiditra ao anatiny, ka miahiahy `ndrao dia hahazo ny fahefana ambony indrindra ny hafa. Tsy afaka ny hanaiky izy ireo fa tahaka ny ilana ny fanomezam-pahasoavana ananany dia ilaina ihany koa ireo fanomezam-pahasoavan'ireo mpiara-miasa aminy mba hahatonga ny asa hahomby. Ny tena fitiavana marina an'Andriamanitra anefa dia miaraka amin'ny fahatokiana marina sy feno fanajana. Ary izay tia an'Andriamanitra, dia ho tia ny rahalahiny ihany koa.
Tsy tokony hisy fahefana mibaikobaiko sy manjakazaka ary mifehy ny hafa. Tokony hikoriana eo amin'ny fiainana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rivo-piainana feno fanasitranana sy fanoloran-tena. Ny fanahy sy ny fiteny ary ny asa ataon'ireo mpiasa rehetra dia tokony haneho ny fahatsapany fa miasa eo amin'ny toeran'i Kristy izy. Ny fahefana izay noraisiny avy tamin'ilay Mpampianatra lehibe dia fahefana natao hanabeazana ny hafa, fa tsy natao hibaikobaikoana sy hanaovana didy jadona. Tokony hanatona an'i Kristy izy, tahaka ny olona iray maniry hianatra ny fomba hampianarana sy hanampiana ny hafa.
Ny faharetana, ny fahononan-tena amin'ny fifaliana dia isan'ireo "fanomezam-pahasoavana tsara indrindra". Toy izany ihany koa ny herim-po hanaraka ny lalan'ny adidy, na dia amin'ny fotoana izay hampisarahan'izany lalana izany antsika amin'ireo namantsika aza. tokony hitarika ho amin'ny fahamafisan-doha anefa ny faharesen-dahatra amin-kerim-po. Ny fahamafisan-doha mantsy no mitarika ny olona iray hiziriziry amin'ny heviny. Aoka isika rehetra hiambina sy hivavaka.
Talenta mahafinaritra ny fahaizana mandaha-teny — talenta izay afaka ny ho tonga hery lehibe na ho amin'ny soa na ho amin'ny ratsy.
Ny haranitan-tsaina, ny fahazaina mamantatra ny hatsaran'ny zavatra iray, ny fahaiza-manao, ny fahaizana manatsara zavatra, ny tena fahaizana manome tombambidy marina — ireo dia ampiasain'Andriamanitra amin'ny asany. Tsy maintsy apetraka eo ambanin'ny fahefany anefa aloha ireo. Ny fanatrehan'Andriamanitra no tokony ho hery hifehy. Ny olona izay mampiray ny fony amin'ny an'i Kristy, eo amin'ny faniriana sy ny fanatanterahana, dia mifanaraka amin'ny sitrapon'i Kristy. Tokony haniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra isika. Tsy midika anefa izany fa tokony hikatsaka ny ho voalohany isika.
Tokony hiezaka fatratra isika handray hery hanarahana ny ohatr'i Kristy, ka ho tonga mpilaza ny filazantsarany. Izany no fivavahana marina. Tonga ny fakam-panahy, manasaro-javatra ny ahiahy sy ny tombantombana ratsy, ka lasa sarotra amintsika ny hihazona ny toe-panahin'ny fiainana ambony kokoa. Na dia izany aza, dia irin'Andriamanitra ny handehanantsika mahitsy amin'ny fahazavany masina sy feno fitahiana. — PUR, 26 Jol. 1906.